त्यो दिन बिहानै घर बाट ५ बजे नै बारीमा निस्किएका तेजबहादुर…. – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/त्यो दिन बिहानै घर बाट ५ बजे नै बारीमा निस्किएका तेजबहादुर….
काठमाडौं । संखुवासभा ६ जनाको ज्यानलिने गरि भएको घटनाले सबैको मनमा डर पैदा गरिदिएको छ । अहिलेसम्म कसले र किन घटना गरायो भन्ने खुलिसकेको छैन। संघीय इकाइ प्रहरी कार्यालय धरान, जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को टोली अनुसन्धानमा खटिएका छन्।
कोरोना मुक्त काठमाडौं उपत्यका
बलिउडलाई फेरि अर्को झड्का, २८ बर्षीय निर्देशकको निधन